युक्रेन रुसको आक्रमणको ४२ दिन पूरा, कस्तो छ अबस्था ?
एकीकृत समाजवादी एमाले गठबन्धन नेपाली कांग्रेस केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवा पक्राउ स्वास्थ्य
‘गौतमबुद्ध विमानस्थलको शुभारम्भले पर्यटन र दीगो आर्थिक विकासको आधार तयार भयो’
स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सरकारले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको नेता ज्ञवालीको आरोप
ललितपुरमा चिरीबाबु दोब्बर बढी मतले अघि
मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना सतर्कता अपनाउन अनुरोध
मोदीले प्रयोग गर्ने गाडी भारतीय वायुसेनाको विमानले भैरहवा ल्याइदियाे
निर्वाचन आयोगले भन्यो, ‘मापसे गर्ने व्यक्ति मतदाता भएपनि मतदान केन्द्रमा प्रवेश नदिनु’
आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि, के- के गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौँ महानगर वडा १५ मा ईश्वरमान डंगोल विजयी भइसकेको केशव स्थापितको स्वीकारोक्ति
काठमाडौं महानगर वडा २७ मा काँग्रेसको तर्फबाट खड्गी वडाध्यक्षका उम्मेदवार
१९ वडामा एमालेबाट मुनिकारको उम्मेदवारी
एमालेबाट काठमाडौं महानगर वडा २० का वडाध्यक्षका प्रत्यासी ताम्राकार
गठबन्धनको सहमती र निर्णय प्रतिकुल हुनेगरी महालक्ष्मीमा माओवादीको उम्मेदवारी
निर्वाचन अगावै नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित
उप-मेयर पूर्व-माओवादीलाई दिँदा ललितपुर एमालेमा खैलाबैला, असन्तुष्टीको संख्या बढ्दो
नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बृहत चुनावी जनसभा
महालक्ष्मीबासीको व्यापक समर्थन बटुल्दै मेयरका प्रत्यासी नकुल थापा
पल शाहविरुद्धको मुद्दामा ट्विस्ट : नाबालिग गायिकाले अदालतमा बयान फेरिन्
६२ लाख बराबरको मालसामानसहित ट्रक नियन्त्रण
हरप्रहर डेस्क प्रकाशित मिति: २०७८ चैत्र २४, बिहिबार (१ महिना अघि)
एजेन्सी – युक्रेनमा रुसको आक्रमणको ४२ दिन पूरा भएको छ । पूर्वी युक्रेनमा रुसी आक्रमण तीव्र हुने डरले हजारौं मानिसहरू डोनबासबाट भाग्न खोजिरहेका छन् । युक्रेनी अधिकारीहरूले पनि हमला नबढेसम्म यहाँका सर्वसाधारणले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर यहाँबाट छाड्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
डोनेट्स्क र लुहान्स्क सम्मिलित सम्पूर्ण डोनबास क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न रुसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई घेरा हाल्ने प्रयास सुरु गरेको छ । अमेरिकाले पूर्वी भागमा आफ्नो सैन्य कारबाही बढाउन रुसले अब किभ र चेर्निहाइभबाट आफ्ना सेना फिर्ता गरेको बताएको छ ।
स्थानीय अधिकारीका अनुसार होस्टोमेल क्षेत्रबाट चार सयभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले बिहीबार बिहान रुसमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई ‘धेरै कमजोर’ भनेका छन् । उनले भने कि यस्ता हल्का प्रतिबन्धहरूले आक्रमणकारीलाई आफ्नो आक्रमण जारी राख्न अनुमति दिन्छ ।
अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति पुटिनका छोरीसहित निकटका व्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थालेको छ । बेलायत र अमेरिका दुबैले रुसको सबैभन्दा ठूलो बैंक (एसवर बैंक) को सम्पत्ति जफत गरेका छन् ।
युरोपेली संघका नेताहरूले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि विचार गरिरहेका छन् । यसमा रूसबाट कोइला आयातमा प्रतिबन्ध पनि समावेश छ । तर केही वरिष्ठ नेताहरूले भने कि तेल र ग्यासमा प्रतिबन्ध पनि आवश्यक छ ।
रुसका राष्ट्रपतिले भनेका छन्, ‘प्रतिबन्धहरू आफ्नो देशले स्वतन्त्रताको लागि तिर्नुपर्ने मूल्य हो । पोप फ्रान्सिसले युक्रेनको बुचा सहरमा भएको नरसंहारको निन्दा गरेका छन् । तर, रुसले यी आरोपहरूलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को रुसको सदस्यता कायम राख्ने वा नराख्ने भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले बिहीबार मतदान गर्नेछ । अमेरिकाले केही युक्रेनी सैनिकहरूलाई उन्नत एन्टी–ट्याङ्क स्विचब्लेड ड्रोनहरू सञ्चालन गर्न सिकाएको छ । एक अमेरिकी रक्षा अधिकारीले यो जानकारी दिए ।
यो प्रशिक्षण युक्रेनका ती सैनिकहरूलाई दिइएको छ, जो पहिले नै अमेरिकामा थिए । सहज रूपमा ब्याकप्याकमा बोकिएको, ड्रोनसँग अपरेटरबाट माईल टाढा हुँदा पनि लक्ष्यमा “होभर“ गर्ने क्षमता छ ।यी ड्रोनहरू आफ्नो लक्ष्यमा ब्लास्टरको साथ खस्ने तरिकाका कारण यी ड्रोनहरूलाई प्रायः “कामकाजी“ भनिन्छ ।
अमेरिकी अधिकारीले तालिम पाएका युक्रेनी सैनिकहरूले पनि व्यावसायिक सैन्य शिक्षा कार्यक्रममा भाग लिएको बताए । यति मात्र होइन, युक्रेन जानुअघि यी सैनिकहरूलाई अन्य हतियार प्रयोग गर्न पनि तालिम दिन सकिन्छ ।
स्विचब्लेड ड्रोनहरू युक्रेनी सेनाका लागि एकदम नयाँ छन् । ह्वाइट हाउसले मार्च १६ मा युक्रेनमा १०० स्विचब्लेड ड्रोन पठाउने बताएको थियो । अहिले अमेरिकी हतियार युक्रेन पुग्न ४ देखि ६ दिन लाग्ने भएको छ । आक्रमणपछि रुसले युक्रेनमा कुल १४५० क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको अमेरिकी अधिकारीले बताए ।
रुसको आक्रमणका बाबजुद अमेरिकाले युक्रेनमा लडाकु विमान नपठाउने कारण दिएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जोन किर्बीले आफ्नो देशले युक्रेनमा लडाकु विमान पठाएमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसलाई युद्ध चर्काउने सङ्केत मानेको हुनसक्ने बताएका छन् ।
जोन किर्बीले बीबीसीलाई भनेः “यदि अमेरिकाले युक्रेनमा लडाकु विमानहरू पठाउँछ भने, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यो युद्धलाई बढाउने हो भनेर गलत बुझेका हुन सक्छन् ।’’ “हामी सबैलाई थाहा छ यो युद्ध पहिले नै खराब अवस्थामा छौं । यस्तो अवस्थामा यसलाई बढाएर दुई आणविक हतियार हतियार भएका देशहरू (अमेरिका र रुस) बीचको द्वन्द्व बढ्न सक्छ । यो रुस र अमेरिका दुवैका लागि राम्रो थिएन न युक्रेनका लागि। ।’’
“स्पष्ट रूपमा अब हिंसा कम भएको छ र रूसी सेनाले युक्रेनको पूर्वी भागहरूमा आफ्नो जोर बढाउँदैछ। हामी सबैलाई थाहा छ, युक्रेन र रुस विगत आठ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा लडिरहेका छन्। यदि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बस्छन् भने। र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग वार्ता गरी कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गरेपछि युद्ध रोकिनेछ ।”
कर्णाटक हिजाब विवादका बीच चर्चामा आएका मुस्कान खानको प्रशंसामा उनका बुबाले अब चरमपन्थी संगठन अल–कायदा प्रमुख अल–जवाहिरीको तर्फबाट जवाफ दिएका छन् । मुस्कान खानका बुबाले अल जवाहिरीको भनाइलाई अस्वीकार गर्दै आफू र आफ्नो परिवार भारतमा शान्तिपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् ।
समाचार एजेन्सी पीटीआईले मुस्कान खानका बुबा मोहम्मद हुसैन खानलाई उद्धृत गर्दै भने, “हामीलाई यो (भिडियो) बारेमा केही थाहा छैन । हामी उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर थाहा छैन । मैले उनलाई आज पहिलो पटक देखें। उनले अरबीमा केही कुरा गरे। हामी सबै यहाँ दाजुभाइ जस्तै माया र विश्वासका साथ बाँचिरहेका छौं ।’’ बीबीसीबाट